यस संस्थाको स्वामित्वमा रहेका तपसिलमा उल्लेखित सवारीसाधनहरु जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गरिने भएकोले इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन (१३ सेप्टेम्बर २०१९) सम्म कार्यालय समय अपरान्ह ५ बजे भित्र तल उल्लेखित शर्तहरुको अधीनमा रहने गरी गोप्य शीलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । बोलपत्र फाराम सूचनाको अवधिभर कार्यालय समयभित्र गैरीधारा स्थित संस्थाको मुख्य कार्यालयबाट खरीद गर्न सकिनेछ ।
सूचनामा उल्लेखित अवधिको कार्यालय समय भित्र सिलबन्दी बोलपत्र संस्थाको मुख्य कार्यालय, गैरीधारामा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट वा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिनसम्म बोलपत्र पेश गर्न पाईनेछ । बोलपत्र जस्को नाममा खरीद गरिएकाे हो, सोही बोलपत्र उसैको नाममा पेश गर्नु पर्नेछ अन्यथा बदर हुनेछ ।
बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको पर्सिपल्ट मिति २०७६ भदौ २९ (१५ सेप्टेम्बर २०१९) का दिन दिउँसो १ बजे संस्थाको मुख्य कार्यालय गैरीधारा काठमाण्डौमा बोलपत्र पेशकर्ता वा निजको प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा सिलबन्दि बोलपत्र खोलिनेछ । कुनै बोलपत्र पेशकर्ता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
बोलपत्रमा आफूले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षर दुबैमा स्पष्ट लेखिएको हुनु पर्दछ । फर्म/कम्पनि/संस्थाले पेश गर्ने बोलपत्रमा बोलपत्रको निर्दिष्ट स्थानमा छाप तथा अधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर हुनु पर्दछ । बोलपत्र केरमेट वा सच्याईएको खण्डमा त्यस्तो स्थानमा बोलपत्र पेश गर्नेको हस्ताक्षर तथा फर्म वा कम्पनी भएमा छाप तथा अधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत समेत हुनु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा लेखिएको फरक पर्न गएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिईनेछ ।
कुनैपनि शर्त राखी पेश गरिएको बोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
स्वीकृत बोलपत्रवालाले बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिले १५ दिनभित्र कबोल गरेको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरीसक्नु पर्नेछ अन्यथा बोलपत्र दाखिला गरिएको सम्पूर्ण रकम जफत हुनेछ ।
लिलामबाट सकार गरेको सवारी साधनको प्रचलित नियमानुसार नामसारी (अञ्चलीकरण गर्नु पर्ने भए सो समेत) गरी दर्ता गर्ने दायित्व लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनीको हुनेछ ।
लिलामीमा राखिएका सि.नं. १ देखि ५ नम्बरसम्मका सवारी साधनहरु हेर्न चाहने ईच्छुक व्यक्तिले भदौ २७ गते (१३ सेप्टेम्बर २०१९) सम्म कार्यालय समय भित्र संस्थाको मुख्य कार्यालय गैरीधारा, काठमाण्डौमा आई हेर्न सक्नु हुनेछ । # सि.नं. ६ को सवारी साधन धुसेरी, पसार्, चितवन स्थित संस्थाको कार्यालय मा गई हेर्न सकिने छ । (फोन नं ०५६-५८२०७० र मोबाईल नं. ९८५८४४०४६२)
बोलपत्र फाराम रु. १,०००/- तिरी संस्थाको मुख्य कार्यालयबाट खरीद गर्न सकिनेछ । खरीद गरिएको बोलपत्र फाराम फिर्ता हुने छैन ।
बोलपत्र पेश गर्दा आफूले कबोल गरेको रकमको १०% रकम नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको नाममा सानिमा बैंक लि., नारायणचौर काठमाण्डौमा रहेको खाता नं. 001011060006781 मा जम्मा गरेको सक्कल भाैचर समेत बोलपत्र सँगै सिलबन्दी खाममा राखी पेश गर्नु पर्नेछ अन्यथा बोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । यसरी जम्मा गरेको रकम बोलपत्र स्वीकृत भएमा कबोल गरेको रकममा मिलान गरिनेछ भने अस्वीकृत बोलपत्र वालाहरुलाई बोलपत्र खोलेको एक हप्ता भित्र फिर्ता गरिनेछ ।
एउटा बोलपत्रबाट एक भन्दा बढी सवारीसाधनको निमित्त बोलपत्र पेश गर्न पाईने छैन । एक भन्दा बढी सवारीसाधनको निमित्त बोलकबोल गर्न चाहनेले प्रत्येक सवारीसाधनको निमित्त बेग्ला बेग्लै बोलपत्र फाराम पेश गर्नु पर्नेछ ।
बोलपत्र सिलबन्दी खाममा पेश गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक सिलबन्दी खामको अगाडी आफूले कबोल गरेको सवारीसाधनको बोलपत्र सि.नं. उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
लिलाम गरिने सवारीसाधनहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही बमोजिम लिलामीमा भाग लिनु पर्नेछ ।
सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई कबूल गरेको मूल्यमा सवारी साधन नामसारी गरी दिईने छ । लिलामी पर्ने व्यक्तिले बोलपत्र खोलेको १५ दिनभित्र आफूले कबोलेको सम्पूर्ण रकम नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको नाममा सानिमा बैंक लि., नारायणचौरमा रहेको खाता नं. 001011060006781 मा जम्मा गरी सक्नु पर्नेछ । उक्त समयभित्र रकम पूरा जम्मा नगरेमा धरौटी वापत जम्मा गरेको रकम जफत हुनेछ र त्यस्तो सवारी साधनको सम्बन्धमा संस्थाले निर्णय गरे अनुसार हुनेछ ।
बोलकबोलमा भाग लिनेहरु मध्ये लिलाम नपर्ने व्यक्तिहरुले धरौटी वापत जम्मा गरेको रकम बोलपत्र खोलेको सातौं दिन देखि फिर्ता गरिनेछ ।
कुनै पनि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा खारेज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा निहीत हुनेछ ।
बोलपत्रको साथमा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
१. फर्म, कम्पनि वा संस्थाको हकमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपि
२. PAN को फोटोकपि
३. फर्म, कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई दिईएको अख्तियारी पत्र
४. व्यक्तिको हकमा PAN को फोटोकपि